Adalata Manufacturers & Suppliers | China Ada Ada tube Factory
lkV Silicon roba oyi Ada Ada USB ngwa
Na nchikota ： Ọnụ mkpuchi ihe a na-eji akwa silicon roba dị elu yana, ọ nwere arụmọrụ hydrophobic dị mma, mgbe ụmụ irighiri mmiri mgbe ihe ndị dị n'elu, dị njikere ịda, anaghị etolite ihe nkiri mmiri na-eduzi mmiri ma nwee hydrophobic na-agwọ onwe ya. Ke adianade do, o nwere ike mkpuchi, iguzogide, corrosion eguzogide na UV iguzogide, nnukwu uru bụ iji hụ ogologo oge ojiji nke anụ arụmọrụ. Ogologo ndụ, otu ndụ na ahụ USB. Ngwa cabl ...
35kV Okpomọkụ shrinkable busbar
A na-eji mkpuchi mkpuchi ụgbọ mmiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ejikarị eme ihe na nkwụsị nke bọs Site na iji ha, ọ nwere ike izere obere oge, ọkụ ọkụ eletrik na iji mee ka ngwa ngwa eletriki dị ogologo. , akara akara dị mma, esistance mmiri, elu na ala okpomọkụ-resi stance, wear-resistancer requirements.Insulation Class Volta: 35kv Conventional Color: Red, Green, Yellow, Black, Blue, Agba pụrụ iche nwere ike ịhazi ya na goo ...
Okpomọkụ na-ejikọ njikọ eriri nke etiti
Summary ： A dịgasị iche iche nke iko eriri mesikwuru plastic shei ngwaahịa. tumadi 10kV otu isi 10kV atọ isi, 35kV otu isi 35kV atọ isi, 110kV, 220kV, 500kV otu isi intermediate nkwonkwo iko ígwè shei a ole na ole ige. Isi ọrụ nke iko fiber na-eme ka shei rọba sie ike bụ iguzogide mmetụta nke ụfọdụ mpụga ike na mmebi nke nkwonkwo dị n'etiti. Usoro ntinye: 1 njikere 1.1 Lelee iko karama mesikwuru shei plastic maka nkọwa na ...
l0kV Okpomọkụ shrinkable busbar
A na-eji mkpuchi mkpuchi ụgbọ mmiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ejikarị eme ihe na nkwụsị nke bọs Site na iji ha, ọ nwere ike izere obere oge, ọkụ ọkụ eletrik na iji mee ka ngwa ngwa eletriki dị ogologo. , akara akara dị mma, esistance mmiri, elu na ala okpomọkụ-resi stance, wear-resistancer requirements.Insulation Class Volta: 10kv Conventional Color: Red, Green, Yellow, Black, Blue, Agba pụrụ iche nwere ike ịhazi ya na goo ...
lkV obere voltaji okpomọkụ shrinkable busbar
A na-eji mkpuchi mkpuchi ụgbọ mmiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ejikarị eme ihe na nkwụsị nke bọs Site na iji ha, ọ nwere ike izere obere oge, ọkụ ọkụ eletrik na iji mee ka ngwa ngwa eletriki dị ogologo. , ezigbo akara, nnyefe mmiri, oke na ala-resi stance, na-eyi-resistancer chọrọ.Insulation Class Volta: 1kv Agba Agba: Red, Green, Yellow, Black, Blue, Agba pụrụ iche nwere ike ahaziri n'ọtụtụ anyị ...